यसरी बनाउनुहोस झोल्लिएको स्तनलाई टाइट र आकर्षक
May 19, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on यसरी बनाउनुहोस झोल्लिएको स्तनलाई टाइट र आकर्षक
स्तन सानो वा ठूलो हुनु नारीको शारीरिक विकासमा निर्भर हुन्छ। स्तन भनेको तन्तुहरू मिलेर बनेको एउटा ग्रन्थि हो, जसलाई चिकित्सकहरू ग्लान्ड भन्छन्। हार्मोनका कारण व्यक्तिपिच्छे स्तनको आकार घटबढ हुन्छ। हार्मोन बढ्दा स्तनको आकार ठूलो हुने र घट्दा सानो हुने हुन्छ।
थाइराइडले पनि स्तनको आकार बढाउने वा घटाउने काम गर्छ। थाइराइड भएपछि तौल बढ्ने क्रममा स्तन पनि बढिरहेको हुन्छ, डाक्टरुका अनुसार ‘त्यस्तो अवस्थामा हार्मोन विशेषज्ञको रायअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
१७ वर्षकी एक नेपाली किशोरीको स्तन अत्यधिक ठूलो भएको अवस्थामा सबै जाँचपछि उनको स्तन घटाउने शल्यक्रिया गरिएको डा। शाक्यले बताए। उनको दुईवटा स्तनबाट १ किलो मांसपेशी हटाउँदा स्तन केही सानो भयो। उनको फेरी शल्यक्रिया गरेर उपयुक्त साइजमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो। यसरी स्तनको आकार घटाउँदा भने कुनै तन्तु काटिएर पछि ब्रेस्ट फिडिङका लागि दूध नआउने सम्भावना पनि हुन्छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार किशोर अवस्थादेखि युवावस्थाको मध्यसम्म स्तन कसिलो नै रहन्छ, तर त्यसपछि क्रमशः झोल्लिन थाल्छ, विवाह गरेर स्तन झोल्लिएका महिलाहरू स्तन कसिलो बनाउन चाहन्छन्। त्यसका लागि छाला काटेर कसिलो बनाइन्छ। स्तन क्यान्सर भएर स्तन काट्नु परेकाहरूले पनि पछि सिलिकन इम्प्लान्ट गरेर स्तनलाई आकार दिन सक्छन्। स्तन ठूलो भएका अधिकाशंलाई ब्याक पेन तथा काँधमा भारी अनुभव हुने चिकित्सकहरूले बताए ।
विसं. २०७६ जेठ ५ गते आइतबारको राशिफल, क्लिक गरेर हेुर्नहोस कस्तो छ आजको भाग्य ?
Priyanka Karki poses for Ruslan Cover Calendar and trust me they are hot as fire..
सत्य तर अनौठ घटना : जब चिहानबाट निस्किए तीन बर्ष अघि मरेका आमाबाबु
April 28, 2019 April 28, 2019 अखवार अनलाइन
कपाल हेर्दैमा थाहा हुन्छ महिलाहरुको स्वभाव थाहापाउनुहोस
February 28, 2019 अखवार अनलाइन
बिहे गरेको ३ वर्षपछि भयो श्रीमान श्रीमतीको पहिलो भेट ,३ वर्षसम्म किन भेटेनन् ?
विवाह गरेको तीन मिनेटमै डिभोर्स !
April 16, 2019 April 16, 2019 अखवार अनलाइन
पहिलोपटक खोलियो अनौठो बेश्यालय, यौनको प्यास मेट्नेको भिड
April 20, 2019 अखवार अनलाइन
सरु थापाको ‘गोरखा बजार’ सार्वजनिक भिडियो सहित